Dawlada Somaliya Oo Dhexda U Xidhatay Sidii Ay U Heli Lahayd Lacagihii Iyo Hantidii Dibadaha Ka Yaalay Dalkii La Isku Odhan Jiray Somaliya | Cadceed newssite
Dawlada Somaliya Oo Dhexda U Xidhatay Sidii Ay U Heli Lahayd Lacagihii Iyo Hantidii Dibadaha Ka Yaalay Dalkii La Isku Odhan Jiray Somaliya
Jan 06, 2013 Muqdisho (Cadceed) – Dawlada Somalia ayaa ku hawlan sidii ay u heli lahayd lacagihii kaga maaqnaa bangiyada dalalka aduunka qaarkood ka hor intii aanay burburin dawladii la isku odhan jirey Somalia sanadkii 1991.
Wasiirka Arrimaha Dibada ee Somalia Foosiya Yuusuf Xaaji Aaden oo haatan ku guda jirta badhista iyo sii daynta lacagahaas ayaa la sheegay inay dhawr dawladood booqan doonto todobaadkan gudihiisa, waxana la sheegay in ay dokumentiyo iyo qoraalo cadeynaya lacagahaas ay u gudbin doonto waddamada ay yaalaan. Lacagahan oo sanaddo badan ka xanibnaa dawlad la’aan awgeed iyo wixii hanti ah ee dawladii Siyaad Barre calaamka ay ku lahayeen ayaa la wariyay inay ku dacwoonayso, waxana ka mida sida dhul ganacsi, Xafiisyada Safaaradaha, Maraakiibta iyo Diyaarado ay dawladu lahayd,
Danjiraha u fadhiya Somalia dalka Kenya Maxamed Cali Nuur ayaa sheegay in wixii hanti ah ee ay dawladii hore ee Soomaaliya lahayd ay ka duwantahay waxyaabaha la musuqay . “Waxyaabaha aanu leenahay sida xafiska Safaraadan ee ku yaal magaladan Nairobi oo runtii la iska qaatay ayaanu dib ula soo noqonay, waxaana ay ka mid yihiin waxyaabaha aanu ka hadlayno” sidaa waxaa sheegay safiirka u fadhiya dawlada Somalia dalka Kenya Maxamed Cali Nuur oo shir jaraa’id ku qabtay xafiskiisa magalada Nairobi.
Shabakada wararka Intarnetka ee Sabahi Online ayaa daabacday warbixin ay kaga waramayso in Wasiirka Arrimaha Dibada Ms. Foosiya ay u safri doonto dalka isu taga Imaaradka Carabta ee UAE , Dalka Talyaaniga iyo dalka Boqortooyada Ingiriiska oo ay haatan ku sugan tahay. “Waxaanu samayn doonaa baadhis aanu ku qiimayn doono hantida aanu leenahay ee dawladihii Somalia kaga xanibanaa shanta qaaraadod ee aduunka, waxana aanu kala taashan doonaa khubaro Somali ah oo ku takhasustay waxyabahan iyo la taliyayaal ajaanib ah oo Dhaqaalaha ah iyo sharci yaaqaano ajanib ah si aanu u helno hantidayada naga maqan” sidaana waxaa tidhi wasiirka arrimaha dibada Somalia Ms. Foosiya Yuusuf Xaaji Aaden oo waraysi siisay shabaakada Sabaahi online.
Wasiiradu waxaa kale oo ay sheegtay in xukumada Somalia ay baaq u direyso dawlada iyo maamulka dalka Swiss, kaas oo ay kaga dalbanayso inay u soo celiyaan lacagtii ay sanadahaas oo dhan hayeen, waxa kale oo ay ku xustay baqaas in dalalka Jarmalka, Taliyaaniga iyo Yeman ay iyagana ka doonayaan inay u soo celiyaan hantida sida Maraakiibta iyo Diyaaradaha ay mudadaas haysteen.
Hay’ada dhaqalaha ee loo yaqaan Swiss Fanancial Market Supervisory Authority ayaan ilaa imika cadeyn cadadka lacageed ee ay u haysay dowladii Siyaad Barre, akountkii iyo heshiisyadi u dhexeeyay bagiga Swiss iyo shaakhsiyaad ka tirsanaa dawlaadi Somalia oo hantidooda wakhtigaas la hakiyey.
Dagaaladi iyo burburkii Somalia waqtigaas ayaa dowlado kala duwani hakiyeen lacagihii iyo hantidii ugu jirey masuliyiin ka tirsanaa wakhtigaas dawlaadi Somalia iyagoo ilaalinayay in sifo sharci darro ah loogala baxo akountdadaas. Laakiin, inta badan hantida sidaa Dhismayaasha safaaradaha iyo Diyaaradaha ama Maraakiibta ayaa la wariyay in sifooyin kala duwan oo khaldan loo maamulay sida ay warbixintu sheegtay.
Waxana ururka Qaramada Midobeey shaacisay warbixin bishi July sanadki hore soo baxday, dowladi ku meel gadhka ahayd ee TFG-da inay sifooyin khaldan u maamuliyeen hantida, iyagoo ku eedeeyay maamuladaas inay musuqeen ugu yaraan %70 dhaaqalaha la bixiyo. Inta badan dhaqaalahaas ayaa looga shakisanyahay in masuuliyintii kala danbeeyay ee ka tirsanaa dowladihii TFG-da ee Soomaaliya ay u direen ama ku shubteen bangiyo dibada ka ah dalkaas. Wasiirka Wasaarada Maaliyada Somalia Maxamuud Xasan Saleebaan ayaa baaq uu u diray dowladaha calaamka ku codsaday in ay la shaqeeyaan kana cawiyaan sidii ay u heli lahayeen hantida ka luntay ama la musuq maasuqay. “Anagu isma lihi in aanu helayno lacagihii deeqaha ahaa ee labaatankii sanadood ee ugu danbeyey lagu shubtay accountada dalal shisheeye ama account ay dawladihi naga horeeyay lahayeen” sidaas ayuu yidhi wasiirka maaliyada Somalia Maxamuud Saleebaan.